Maxaa u qorsheysan Joe Biden? | Star FM
Home Caalamka Maxaa u qorsheysan Joe Biden?
Maxaa u qorsheysan Joe Biden?
Madaxweynaha maanta la wareegaya hoggaanka Maraykanka Joe Biden ayaa sheegay inay jiraan arrimo si degdeg ah loogu tallaabi qaadi doono oo la xiriira socdaalka , la tacaalidda cudurka COVID-19 iyo xal u helidda saameynta isbeddellada cimillada.
Warbaahinta Aljazeera oo soo xiganaysa qaar ka mid ah kaaliyaashiisa ayaa ku warramaysa inuu Biden soo saari doono ilaa 15 ah amarro madaxweyne ka dib marka maanta la dhaariyo.
Waxaa la filayaa sidii uu horay u tilmaamay inuu saxiixo amar looga laabanaya go’aankii uu Trump qaxootiga ku xannibay .
Previous article22 qof oo loo xiray iskudhacyo saameeyay Tana River
Next articleJoe Biden oo noqday madaxweynaha 46-aad ee dalka Mareykanka